Dala intente entsha- iimveliso zaseKampini zohlaza zase-China
Phambi kokuba wakhe intente, kufuneka wazi ukuba iyakuba yintoni na intente esetyenziselwa yona kwaye luhlobo luni lwendawo apho intente isetyenziswayo, njengokumisa inkampu, ukukhwela ulwandle, umkhosi, okanye indawo yokuhlala elangeni, yile esetyenziswa kwindawo ebandayo okanye eshushu. indawo, ngaba kukho umoya onamandla kunye nemvula, ngaba kukho nayiphi na imfuneko ekhethekileyo. Emva koko unokuqala ukwenza intente.
Apha siza kuthatha intente ye-igloo njengomzekelo. Le ntente yentengiso yaseJamani yekamper. Kufuneka ilungele abantu aba-3, ukuseta ngokukhawuleza kunye nokusondeleyo, kufanele ukuba kube nokusebenza iveki enye yokumisa inkampu, kufuneka ube nendawo ye-rucksack, izihlangu kunye nezixhobo. Emva koko sihamba ngezantsi kwamanqanaba.
Ngokwe-ISO5912, umntu ngamnye kufuneka afumane isithuba esimalunga nama-200 x 60cm, umntu omnye makangabi ngaphantsi kwama-200 x 180cm. Njengomntu waseJamani mkhulu kunesiqhelo, sithatha isigqibo sokuba nobungakanani 210 x 200. Ukuphakama kwesiqhelo kujikeleze i-120-140cm kwintente ye-igloo, sithatha isigqibo se-120cm, njengoko kufanele ukuba kubekho malunga nama-20cm ashiyekileyo kwinkqubo yokumisela ngokukhawuleza. Ukuze ube nesithuba se-rucksack kunye nezinye izincedisi, sinqwenela ukuba ne-vestibule ejikeleze i-80-90cm phambi komnyango. Ngoku, sinokuqala ukwenza umzobo. Uninzi lwabenzi beentente banesebe lokuyila kule minyaka.
Emva kokuba umzobo ugqityiwe, umyili uya kwenza ipleyiti ngokomboko. Kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, uninzi lweefektri zentente zenza ipleyiti ngesandla, kodwa ngoku, uninzi lwabathengisi bezentente benza ipleyiti ngesoftware.
Printa iplate kuqala, emva koko usike indwangu ngokweplate.
phrinta isitya sentente
Tyala isampula yokuqala.
Cwangcisa isampulu yokuzama kwaye ujonge ukuba ilungile okanye ifuna naluphi na uphuculo, iqhelekile ukukhangela iipateni, ubungakanani, isakhelo, ukwakhiwa, ukuseta kunye nokuvala kweli nqanaba. Ukuba yonke into ilungile, ke yenza intente yokugqibela ngezinto ezifanelekileyo kunye nesakhelo. Ukuba kukho nantoni na efuna ukulungiswa, yisika le nto wenze i-2 nd , 3 rd , 4 th … zama isampulu kwaye uphinde ujonge kwakhona. Njengoko esi sicelo sentente sikhawulezisa ukuseta kwaye sivalela, sikhetha inkqubo efana nesambulela.
Xa isampulu yokuzama igqityiwe, emva koko yenza isampulu yokugqibela ngendwangu echanekileyo, usebenzise isakhelo esifanelekileyo kunye nezixhobo, njengesibonda sentente, umtya womoya. Kungenxa yokuba le ntente yeyenkampi ubuncinci iveki enye ngaphandle, sithatha isigqibo sokuba lilaphu elikhulu lekholam lamanzi kunye nokudibanisa umthungo. Emva koko yenza uvavanyo ngokuhambelana nendawo osetyenziselwe yona. Njengokungahambeli kwamanzi, ukumelana nomoya, anti-UV, ukumelana nomtya, ukusebenza komoya komoya, umthamo womthwalo…
Nantsi inkqubo eqhelekileyo yokwakha intente entsha, ngaphandle kwemicimbi engentla, zininzi ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe, ezinjengobunzima beyunithi, ubungakanani bokupakisha, ukuhlala ixesha elide, ukuqinisekiswa kwamanzi, ukhuseleko, imfuneko yomthetho kumazwe omsebenzisi wokugqibela. . Ukuba intente yeyomkhosi, njengentente yomkhosi esiyenzele ilungu le-NATO, elinzima kakhulu kwaye kufuneka liqwalasele ngakumbi kwaye kuvavanye ngakumbi.
Ixesha lokuposa: Jul-25-2020